Masedonia: Nahazo Sazy An-tranomaizina Mandritra ny 14 Taona Ilay Mpitandro Filaminanana Namono Nahafaty Tovolahy iray · Global Voices teny Malagasy
Masedonia: Nahazo Sazy An-tranomaizina Mandritra ny 14 Taona Ilay Mpitandro Filaminanana Namono Nahafaty Tovolahy iray
Voadika ny 05 Febroary 2012 7:55 GMT
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Hetsi-panoherana Masedonia 2011 ity lahatsoratra ity.
Nifarana ny Alatsinainy 16 Janoary teo ny fitsaràna ilay mpitandro filaminana iray nahiahiana ho namono nahafaty tovolahy iray raha nanatanteraka ny asany amin'ny maha-mpiambina ny PM azy nandritra ny fankalazana ny fandresena tamin'ny fifidianana ny alin'ny 5 hifoha 6 Jona 2011. Nahazo sazy an-tranomaizina mandritra ny 14 taona ilay mpitandro filaminana, Igor Spasov, mpikambana ao amin'ny hery manokana sady ny hany olona iray niakatra fitsarana noho ny famonoana nahafaty an'i Martin Neshkoski.
Nanaparitaka hetsi-panoherana manohitra ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana ny fikasàna hanarona ny raharaha mahakasika an'io famonoana io, izay nitakian'ireo olom-pirenen'i Masedonia fampiharana ny rariny, anatin'izany ny fisamborana ireo mpiray tsikombakomba, ny andraikitry ny fibaikoana, ary ny andraikitra ara-politika. Nolavin'ny mpampanoa lalàna ny fangatahana ara-dalàna nataon'ny fianakavian'ilay maty mba hanenjehana ireo mpiray tsikombakomba na fantatra izany na tsia, tahaka ireo mpitandro filaminana izay teny akaiky nandritra ny famonoana sy nitsabaka tanatin'ny sehatra nitrangan'ilay famonoana avy eo, toy izany koa ireo izay voarohirohy tamin'ilay fikasàna hanarontsarona ilay raharaha.
Nisy am-polony tany ho any io fitsaràna io izay tsy voarakotra tanteraka sy tsy dia nodinihan'ny ankamaroan'ny media any Masedonia, izay miankin-doha amin'ireo dokam-barotra aloa amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Vohikala iray miavaka amin'ny maro ny PlusInfo.mk, izay namoaka topi-mason'io raharaha io [mk] ny andro alohan'ny fanambarana ilay sazy.
Namoaka famintinana [mk] ireo folo voalohany tamin'ity fitsarana ity ny bilaogy Justice for Martin, nosoratan'ilay mafana fo Voislav Stojanovski ary navoakan'ny [mk] Radio Free Europe tamin'ny voalohany indrindra :
Fakana am-bavany an'i Igor Spasov
Ny 5 Jona 2011, raha nankany Skopje avy tany Kumanovo (izay niasàny amin'ny maha-mpitandro filaminana azy ho an'ny zotram-pifidianana mandritra ireo 15 ora), nanome baiko am-bava avy amin'ny alàlan'ny finday an'i Spasov ny lehibeny mba hanohy hiambina ny Praiminisitra Nikola Gruevski [sary 1, sary 2]. Talohan'io zava-nitranga tany an-kianja io, nahatsikaritra izy fa niezaka hanantona ilay PM in-droa i Martin […]. Voasakan'ny mpiambin'ny PM izany fikasana izany. Ny fikasana fanintelony kosa dia nitranga akaiky ny lampihazo nankalazàna ny fifidianana. Na dia efa nampitandrina azy aza ireo mpitandro filaminana, tsy nisasatra niezaka hanantona ilay sehatra hatrany ihany i Martin. Nihetsika tamin'izany i Spasov ka nitrerona azy, “Mieritreritra ny ho aiza ianao?” – nanomboka nitsoaka i Martin, ka nanenjika azy i Spasov. Mampiahiahy ny fikasàna miziriziry hanapaka ny laharan'ny mpitandro filaminana, ary ny asany dia ny hisambotra azy [Martin] sy hitondra azy any amin'ny tobin'ny mpitandro filaminana. Rehefa nanakaiky azy i Spasov, voafingan'ny tady i Martin, nidona tamin'ny lalan'ny mpandeha tongotra ny lohany ary nitsirara tamin'ny tany izy. Nihevitra izy fa namboarina izany fihetsika izany, ka nodakan'i Spasov moramora tamin'ny tongony izy. Hitan'ity mpitandro filamianana ity fa tsy nahatsiaro tena ilay tovolahy ary niezaka izy hamerina ny ainy. Tsy ela taorian'izay, tonga teny amin'ilay toerana nitrangan'ny zava-drehetra ireo mpitandro filaminana manao fanamiana ary niantso fiara mpamonjy voina. Nilaza tamin'ireo mpiara-miasa aminy i Spasov fa mila miverina any amin'ilay lampihazo [VIP] izy, azy namela azy handeha izy ireo, nefa tsy nangataka azy hampahafantatra ny tenany akory. […] Taty aoriana, nandritra ny fitsaràna, nanambara i Spasov fa nanao fitanana an-tsoratra taorian'io , izay nopotehan'ireo lehibeny.
Fakana am-bavany ireo vavolombelona
Ny ankamaroan'ireo vavolombelona dia tsy afaka nanamarina fa i Spasov tokoa ilay namono hitan'izy ireo. Nandritra ny fitsaràna dia hafa ny endriny, tsy tahaka ny tamin'ny fotoana nitrangan'io loza io, fa zary nihanahia sy somary lava volo ary misy volombava [sary]. Vitsy mihitsy ireo vavolombelona nanamarina fa izy ilay olona; ny ankamaroany dia nanome tantara hafa mikasika ireo zava-nitranga.
Araka ny voalazan'izy ireo, rehefa tratrany i Martin, nodarohiny tamin'ny kihony ny lamosiny. Nianjera i Martin sainhy nahatohana ny tenany avy amin'ny alàlan'ny tanany iray. Niezaka niarina izy sady nihiaka hoe “Aza vonoina aho”, nefa tonga dia nodarohan'i Spasov mafy sady im-betsaka teo amin'ny lohany avy amin'ny alàlan'ny tanany roa i Martin, ary avy eo dia nodakany tamin'ny tongony ny vatan'i Martin. Nanoritsoritra ny habibian'ilay fidarohana tamin'ny alalany'ny fihetsika hita maso ireo vavolobelona sasany. Ny iray amin'izy ireo dia niteny fa any anatin'ireo horonantsary ihany no nahitany famonoana mihoson-drà tahaka izany, raha ny iray hafa kosa dia miteny fa tsy hahita tory izy ny alina taorian'izany. Norahonana mpitandro filaminana ngezalahy, manao fanamian'olon-tsotra iray hafa ireo vavolombelona nikasa ny hanantona an'i Martin. Ny sasany tamin'izy ireo dia nisy namoahana hoe, “ndeha mandeha fa raha tsy izany dia hahazo ny anjaranao koa ianao.”
Fakana am-bavany ireo mpitandro filaminana hafa
Nanamarina ireo mpitandro filaminana manao fanamiana tonga voalohany tany amin'ny toerana nitrangan'ny famonoana fa niresaka tamin'i Martin tany amin'ilay toerana fanaovana lanonana. Taorian'io fahatairana io, nantsoina olona avy ao anatin'ny vahoakabe izy ireo, ary rehefa tonga tany izy ireo dia nilaza i Spasov fa tsy salama i Martin. Nanambara ny iray amin'ireo mpitandro filaminana fa tsy NAHATSIKARITRA na iza na iza izy, na koa nanontany ny olona nitangorona momba ny zava-niseho. Araka ny voalazany, nety ho fahadisoana izany. Tsy NAHATSIKARITRA an'i Spasov izy ireo satria tahaka ny olona avy ao amin'ny fiarovana izy. Tsy nahatsikaritra dianà herisetra teny amin'i Martin izy ireo. Avy eo dia tonga tany an-toerana nanaraka azy ireo ny vehivavy dokotera iray sy mpitsabo mpanampy, izay nanamarina ny fahafatesana, nefa tsy nahatsikaritra dianà herisetra ihany koa. Ireo ekipan'ny CSI izay tonga nanaraka azy ireo kosa dia nahatsikaritra ratra noho ny fifampitolomana teo amin'ny takolak'i Martin sy ny vatany. Nampahafantarin-dry zareo ny Foiben'ny tambajotran'ny Minisiteran'ny Atitany ny mikasika ny fakàna am-bavany ireo vavolombelon'ity fanenjehana sy fikasihan-tànana ity.
Niseho teny amin'ny Lapam-pitsarana ihany koa ireo mpitandro filaminana am-polony tao anatin'ny andiany nisy an'i Spasov izay tany amin'io kianja io iny alina iny. Nilaza i Spasov fa–tahaka azy–nanatanteraka ny andraikiny ihany koa izy ireo tamin'io fotoana io. Izy rehetra, tsy misy anavahana, dia samy nandà izany ary nanambara fa tonga teny amin'ny kianja amin'ny maha-olom-pirenena tsotra azy avokoa izy ireo, ary nifarana alohan'ny sasak'alina ny andraikiny amin'ny asany. Na dia nahitana fifanoherana betsaka indrindra aza tao anatin'ny fanambaran'ireo vavolombelona ireo… Nanohana ny toerana ofisialy noraisin'ny Minisiteran'ny Atitany izy ireo, fa samy niasa izy ireo sy i Spasov ny andro ary nifarana ny 23:30 talohan'ny nanombohan'ny fankalazana ny fandresena tamin'ny fifidianana izany. Nandritra ny andiany farany, nanambara ny Lapam-pitsarana fa tsy dia misy dikany loatra amin'ny filazàna io hetsika io ho “famonoana” ny fanatanterahan'i Spasov na tsia ny andraikiny. Izany fanambarana izany no namarana ny ezany hanamarina fa tany amin'ny toeram-piasany izy tamin'io fotoana io [Fanamarihana: mifandraika amin'ny raharahanà fandraisan'andraikitry ny fibaikoana izany.]
Fijoroana vavolombelon'ireo manam-pahaizana manokana
Nandritra ny andiany [ fahafolo], nodinihana ny antony nahafaty an'i Martin. Nilaza ny “neuro-psychiatre” sy mpitsabo aretin-tsaina iray fa olona mahay mifandray amin'ny manodidina i Spasov, manana herim-po sy faharetana, tsy mahafehy tena raha ny tontolon'ny famolahana ny fihetseham-pony. Nandritra io tranga io dia vitany izany raha ara-tsaina, ary nisendaotra tamin'ny fihantsian'ny ezak'i Martin handositra tahaka ny famnamby atao amin'ny fahefana ananany. Nanoritra ireo ratra mihoatra ny 20 ivelany sy anatiny noho ny fidarohana mivantana na tsia ireo manam-pahaizana mahakasika izany. Rà vaky tany amin'ny atidoha no nitarika ny fahafatesana, vokatry ny fampiharan-kery mivantana manapaka, kinga, ary tanatina fotoana fohy, izay manala ny fieritreretana ny mety ho nahafaty azy noho ny fidonan'ny lohany tamin'ny lalan'ny mpandeha tongotra.
Nanangona [mk] ireo zava-tsy nanjary nitranga nandritra ny andiany voalohan'io fitsarana io ilay mpampianatra Najchevska, mifandraika amin'ny fandikana ireo andininy 309, 314, 320, 327, 333, ary 335 anatin'ny Lalàna momba ny Vono olona nataon'ilay mpitsara vavy izay toa nahafinaritra ery nandritra ny fitsaràna:
tsy nahavita nanome efitrano fitsarana arka izay tokony ho izy mba hahafahan'ireo mpanatrika manaraka izany, isan'ireny ny fianakavian'ny tra-doza;
tsy nampahafantarina ny besinimaro ireo mpitsara, ary tsy narahana ny singa samihafa sy ny dingana feran'ny lalàna;
tsy novakiana ampahibemaso ny fanamelohana ofisialy – ho solon'izay, nasaina nanome ny fakana am-bavany azy ilay voapanga;
tsy nisy tahirim-peo ofisialin'io fitsarana io na avy amin'ny alalàna fandraisana naoty voatendry milina;
ny mpitsara dia nampitandrina ny voapanga tsy hamboraka tsiambaratelo mifandraika amin'ny asany, niteny azy fa mety hiteraka fandikan-dalàna iray hafa izany, na milaza aza ny andininy faha-20 momba ny Lalàna mahakasika ireo Tahiry sy tsiambaratelom-panjakana fa hoe ny antontan-taratasy efa nakatona “tsy sokajiana intsony ho tsiambaratelo rehefa mahakasika asa famonoana, fanitsakitsahana na fanararaotam-pahefana, na fihetsika sy zava-bita tsy manara-dalàna hafa.”
Talohan'ny nifaranan'ilay fitsarana, nikarakara fifanakalozan-dresaka maro ho an'ny daholobe ny hetsika manohitra ne herisetran'ny mpitandro filaminana. Nandritra ny iray tamin'izy ireo, nisy raharaha manan-danja iray “notsinontsinoavin'ny” lapam-pitsarana nofongarina. Mitantara [mk] izany ao anatin'ny bilaoginy i Tamara Atanasoska, mafana fo iray:
[Ramatoa iray avy ao amin'ny mpanatrika ary nilaza ny tenany ho mpampianatra momba fotokevitry ny porofo amin'ny raharaha famonoana ho an'ireo manomana ny doctorat] dia nanontany ny nalehan'ireo lahatsary nitahiry ny zava-niseho tany amin'ny kianja? Mifanila amin'ireo kamera marobe fanaraha-mason'ny fanjakana, misy ihany koa ireo kamera avy amina orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana tahaka ny T-Mobile, izay azo alaina tsy misy olana miaraka amina Fangatahan'ny Lapam-pitsarana […]. Nanambara ihany koa izy fa “any Grande Bretagne dia porofo lehibe indrindra” ireo tahirina fanaraha-maso .”
Nanontaniana ny ‘sheriff’ mpitsongodia raha mety ilaina ireo tahiry ireo, ary namaly izy fa mihoatra ny fahefany izany. Tahaka ny teo aloha dia nibaiko ny foiben-toerana misy azy io mpitsongodia io hanao izay rehetra afany, nanontany ilay ramatoa raha toa nangataka ireo tahirin-dahatsary izy ireo nandritra ny famotorana?
Ny valiny, efa nampoizina, dia – tsia.
Sola indray ny lohan'i Spasov rehefa niseho izy, tsy nisy volombava ary nofosana raha nanolotra ny teny famaranany (sary). Nilaza [mk] izy fa tsy nidaroka ny lohan'i Martin ka nahafaty azy ary nanamarika ny fandraisan'anjaran'ireo mpitandro filaminana hafa: “Nino aho fa ilay fianjerany no nahatonga ny fahafatesan'ilay zalahy iny, nefa raha mijery sy mandinika tsara ny sarin'ilay “autopsie” (fitsirihana aorian'ny fahafatesana), ho hitanao fa lehibe loatra ho ana totohondry ny faritra hita mason'ny ratra manakaiky ny oron'i Martin, raha tsy mba nandinika akory ilay momba ny dona mafy noho ny fanodinan-doha teo alohany tao amin'ny Lapam-pitsarana…”
Niteny [mk] i Spasov fa nanana ny antony tsy nahatonga azy hilaza ny marina rehetra sy hanantona avy hatrany ny fianakaviany izy. Raha fantany fa naratra ilay lehilahy, dia mety ho nentiny tany amin'ny toeram-pitsaboana. Niteny izy fa ” Andriamanitra no Vavolombelona” ary nilaza fa nampiasaina izy hisolo vaika ny ankalana: “…raha mitady olona ho melohana ianao – inty aho eto, fa raha ny zava-marina no ilainao, aza mijery ahy!”
Taorian'ny nanambaran'ny Lapam-pitsarana ny didy, nanatanteraka hetsi-panoherana an-dalambe tany Skopje [mk] ny mpanohitra ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana, mitaky ny fandraisan'andraikitra feno ho an'ireo rehetra voarohirohy amin'io famonoana io.
Ny hetsi-panoherana taorian'ny famoahana ny didim-pitsarana tany Skopje. Ny soratra hita eo amin'ny sorabaventy "Aina > Antoko Politika". Sarin'ny Plusinfo.mk, nahazoana alàlana
Ny 19 Janoary, nanatanteraka fifanakalozan-dresaka ho an'ny daholobe momba ny lohahevitra “Mpiray tsikombakomba tamin'ny Famonoana” ny mpanao fihetsiketsehana “Olom-pirenena ho an'i Masedonia Eoropeana”[mk, hita ao anatin'ny lahatsoratra ny lahatsary iray manontolo] :
Araka ny voalazan'ny Manam-pahaizana momba ny zon'olombelona Mirjana Najchevska, ireo mpiray tsikombakoma dia ireo olona rehetra izay namela dindo hanova ny fizotry ny fandehan-javatra nandritra sy taorian'ny famonoana. Tafiditra anatin'izany ny mpampanoa lalàna sy ny mpitsara mpanadihady izay tsy nahavita ara-potoana namotopotra ny sehatra nitrangan'ilay famonoana , ary tsy niaro ilay faritra; ireo mpitandro filaminana izay tsy nitazona an'Igor Spasov, fa nanampy azy hanisaka ny vata-mangatsiaka; sy ireo sampan-draharaham-panjakana hafa ihany koa, anatin'izany ireo olona izay niezaka hanarona ny famonoana an'i Neshkoski. Ho an'i Najchevska, ny famonoana, ny famotorana, sy ny fitsarana dia maneho sehatra fampijaliana ara-panjakana. Ny hetsika iray manamarika dia ny tsy namahan'ny Lapam-pitsarana ireo rakitry ny fanambarana tsiambaratelo ofisialin'ny mpitandro filaminana, na dia afaka nanao izany tsy nilàna nangataka alalana avy amin'ny Minisitry ny Atitany aza izy.
Nanambara ny rahalahin'i Martin, Aleksandar Neshkoski, fa anarana tsy mitombina/tsy lojika ny an'ireo mpitandro filaminana nijoro vavolombelona, ary nanapaka sy namarana ny fakana am-bavany ireo rehetra izay te-hanome antsipirihany ilay mpitsara, tsy nametrahany fanontaniana lalina. Naneho ny hadisoam-panantenany amin'ny famotorana sy ny fitsarana i Aleksandar. Ho ohatra iray amin'ny fitsabahan'ireo sampan-draharaha ambony indrindra ao amin'ny fanjakana, nanamarika izy fa nanana ny ID-ny tao anaty kitapony i Martin, nefa nafenin'ny Minisitry ny Atitany nandritra ny roa andro taorian'ny famonoana izany. Nilaza io rahalahiny io fa tsy mihevitra ny famaizana an'i Spasov ho mahafa-po ny fianakaviana ary nikatsaka ny fandraisana andraikitra ho an'ireo mpiray tsikombakomba rehetra – raha ilaina izany, avy amin'ny alàlan'ny Fitsarana Eraopeana Momba ny Zon'olombelona any Strasbourg.
Nandritra ny fizarana F & V (Fanontaniana sy Valiny), nanondro i Aleksandar fa nahazo fandrahonana mivantana isanandro vaky, nefa tsy natahotra izy ary hanohy hikaroka ny marina.
Zharko Trajanoski, Mirjana Najchevska ary Aleksandar Neshkoski nandritra ny fifanakalozan-dresaka ho an'ny daholobe tany amin'ny Club GEM ao Skopje, 19 Jan 2012. Sary: Vancho Dzambaski, CC BY-NC-SA.
2 herinandro izayMakedonia
2 herinandro izaySlovenia
Mpanao hetsipanoherana ny fanaovana vaksiny, nanao bemidina tao amin'ny haino-vaky-jerim-panjakana, nandrahona mpanao gazety